कलाकार खड्का भन्छन् 'सरकार सरिता गिरीको संसद पद र नागरिकता खा'रेज ग'रेर देश नि'काला गरियोस् ! - Filmy News Portal Of Nepal
कलाकार खड्का भन्छन् ‘सरकार सरिता गिरीको संसद पद र नागरिकता खा’रेज ग’रेर देश नि’काला गरियोस् !
सांसद रिता गिरीको उ’दण्डता कुनै हालतमा क्ष’म्य छैन । उनका हालका अभिव्यक्तिहरु नेपालको संविधान वि’रुद्ध छ । नेपाली जनताको देशभक्ति भावनामा ठे’स पुर्‍याउने नि’यतले अ’भिप्रे’रित छ । उनले जुन शक्तिलाई रि’झाउन चाहेर बोलेकी छिन्, त्यस शक्तिले पनि देशघा’तीबाट जुनसुकै बेला धो’का हुनसक्छ भन्ने लिखत राखेको हुन्छ ।
कुनै पनि सभ्य मुलुकले अर्को मुलुकका देशभक्तलाई मन पराउँछ, राष्ट्रघा’तीलाई होइन । उनी जस्तालाई थाहा होस्, अङ्ग्रेजहरुले भक्ति थापाको मृ’तक शरीरको दर्शन गरेर झुकेका थिए । उनै भक्ति थापाको देशभक्तिका लागि सम्मानस्वरुप नालापानीमा स्तम्भ गा’डेका थिए । त्यस्ता सम्मानितले नै बहादुरीका साथ आर्जेको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हो ।
आज हामी त्यसै भूमिका लागि भारतसँग जु’धिरहेका छौं । तर, गिरीजस्ता अङ्गिकृत नागरिकहरु हामी वि’रुद्ध भारतीय क’ठपुतली बनिरहेका छन् । उनीहरुका नचाइ र बोलाइ मुलुकको सार्वभौमसत्ता वि’रुद्धको अ’पराध हो । यो मुलुकको संविधान ब’र्खिलाप छ र राज्यवि’रुद्धको अ’पराधको सजायभागी छ ।
देशको संसद जस्तो गरिमामय पदमा रहँदारहँदै आएको उनको अभिव्यक्ति विश्वका संसदीय परम्परा तथा मान्यता वि’परित हो । मुलुकको सम्मानित सदनमा सीमा दावी सम्बन्धी प्रस्ताव राखिएकोबेला यसका बर्खिलाप बोल्नुको नियत राष्ट्रको दाबी वि’रोधलाई क’मजोर बनाउने अभिप्राय हो । गिरी थर उनले श्रीमानबाट पाएकी हुन् र उनको अङ्गिकृत नागरिकता श्रीमान कै कारणले पाएकी हुन् ।
उनले बुझ्नु पर्छ– संसारका कुनै पनि मुलुकमा विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउनका लागि त्यस मुलुकको संविधान पालन गर्ने कसम खानुपर्छ र संविधानमा उल्लेखित भाषा बोल्नसक्ने हुनुपर्छ । अमेरिकालगायत विकसित मुलुकहरुमा विदेशीले नागरिकता पाउन भाषाको दक्षता भएको प्रमाण दिनुपर्छ र संविधानको पा’लना गर्ने कसम खानु पर्छ । त्यो उनले बुझ्नु पर्छ, नबुझे राज्यले संविधान र कानून अनुसार बुझाउन का’रवाही थाल्नुपर्छ ।
संविधानले हिन्दी भाषालाई राज्यमा बोलिने भाषाको रुपमा स्वीकार गरेको छैन । नगर्नुको कारण स्पष्ट छ, यसले तराइमा बोलिने भाषा मैथिली, भोजपुरी लगायतका भाषाहरुलाई विलो’प गराउँछ । हो हिन्दीलाई मैथिली, भोजपुरी भाषालगायतका भाषा र भाषिले बुझ्न थालेका छन् । यसो हुनु हिन्दीले ती भाषाहरु मिचेको कारण हो । तर, यो मिचाहा हिन्दी भाषा तराइका लागि सम्पर्क भाषा हुन सक्दैन ।
तराइका भाषिका क्षेत्रका सीमानामा रहेका दुवै भाषिकाहरु दुवै (मैथिली, भोजपुरी भाषा) भाषा बोल्न सक्छन् र बुझ्छन् । जसरी भारतमा यो हिन्दी भाषा उत्तर भारत र दक्षिण भारतका लागि सम्पर्क भाषा हुन सकेको छैन । त्यसरी नै यो हिन्दी भाषा नेपालको तराइवासीको सम्पर्क भाषा हुन स’क्दैन । स्मरण रहोस्, वर्षेनी सयौं हिन्दी सिनेमा बनाउने मुम्वइमा समेत यो भाषा सम्पर्क त के कामकाजीका रुपमा पनि स्वीकार्य छैन ।
नेपाली राज्यले तराइ मधेशमा केही प’क्षपा’त गरेको छ र शासक वर्गले हे’यभा’व तथा भे’दभा’व गरेको छ । तर, यसलाई ढा’ल बनाउँदै सदनमा हिन्दी बोल्नु तराइका गैर नेपाली भाषिप्रति सरिता गिरीको सद्भाव होइन । यसले तराइ सीमामा हुने भारतीय राज्यबाट हुने दु’र्व्यवहा’र र अ’पमानलाई सहनपर्ने अवस्था कायम गर्नमात्र सघाउ पुर्‍याउँछ ।
यसले आमरुपमा वोलिने मैथिली, भोजपुरी भाषा तथा सभ्यता र संस्कृतिलाई अन्तत नमियानामेट गर्छ । यही कुरा बुझेर मैथिली, भोजपुरी भाषाहरुको उत्थानमा लागेकाहरु हिन्दी भाषाको वि’रोधमा मसिनो स्वरमा उठाइरहेका छन् । तिनीहरुलाई गिरी जस्ता अङ्गिकृ’त नागरिकले सम्पर्क भाषा हिन्दी हो भनेकोमा अलिकति पनि समर्थन गरेका छैनन् ।
हिन्दी सम्पर्क भाषा हो भन्नु आदिवासी नागरिकका वि’रुद्ध अङ्गिकृत वा कृतिम नागरिकको आ’क्रमण हो । यो सहनै नसकिने गरी भर्त्सनायोग्य छ । त्यसमाथि पहिचानका लागि मूलधारका दलहरुलाई त्याग गरी पहिचान आ’न्दोलन गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरुको समाजवादी पार्टीको स्पिरिट वि’रुद्ध पनि छ । यसर्थ संविधानवि’रुद्ध, संसदीय मान्यता प्रतिकुल, समाजवादी पार्टीको पहिचानका लागि आन्दोलन वि’रोधी भएका कारणले राज्यले संवैधानिक
र, कानूनी दायराभित्र ल्याउन कार्वाही गर्न, गरिमामय संसदले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका संसदीय मान्यता र परम्पराको अनुपालन गराउन र समाजवादी पार्टीले पहिचान वि’रोधी क’र्तुतलाई समयममै पहिचान गरी उनलाई का’रवाहीका लागि सम्वन्धित पक्षसँग अनुरोध गर्दछु । कलाकार/निर्माता – नवल खड्का